Ciidamada huwanta oo si buuxda u galay magaalada Kismaayo iyo qarax laga maqlay
October 2, 2012 - Written by
Kismaayo:-War haatan naga soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ay si buuxda u galeen maanta duhurkii magaalada Kismaayo iyaga oo isku fidiyey dhamaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo.
Ciidamada Huwanta ayaa waxay fariisimo ka sameystay xarunta degmada Kismaayo , saldhiga, Dekeda magaalada iyo garoonka diyaaradaha sida uu noo xaqiijiyey ilo wareed ka mid ah ducaada magaalada Kismaayo haatan ku sugan.
Ciidamada huwanta ayaa gawaari ay ku xiran yihiin cod baahiye dadka ugu sheegay in ay is dajiyaan oo aan wax dhibaato ah loo geysan doonin cid gaar ahna loo socon iyaga oo ugu baaqay shacabka in ay soo farfiiqaan kooxaha amniyaadka ee Al-Shabaab ay uga tageen magaalada gudaheeda.
Mid ka mid ah Saraakiisha Ururka Raaskambooni ayaa u sheegay Halgan.net in ay magaalada ay ciidankoodu galeen wax dhib ah ama dagaal ahna aysan kala kulmin.
Sidoo kale goobjooge ku sugan magaalada Kismaayo oo u waramay Halgan.net ayaa sheegay in ciidamo badan ay duhurkii maanta soo galeen magaalada Kismaayo wuxuuna sheegay in qarax laga maqlay xaafada Faanoole balse uusan aqoon wuxuu yahay qaraxaas.